Waa Maxay Doorka looga Baahan Yahay Waaxda Suuqgeynta Digital-ka Maanta? | Martech Zone
Talaado, Febraayo 1, 2022 Khamiista, Febraayo 3, 2022 Douglas Karr
Qaar ka mid ah macaamiishayda, waxaan maareeyaa dhammaan kartida lagama maarmaanka u ah dadaalkooda suuq-geynta dijitaalka ah. Kuwa kale, waxay leeyihiin shaqaale yar waxaanan kordhinay xirfadaha lagama maarmaanka ah. Kuwa kale, waxay ku leeyihiin koox si aad ah u xoogan gudaha waxayna kaliya u baahan yihiin hagitaan guud iyo aragti dibadeed oo ka caawisa iyaga inay sii ahaadaan kuwo hal abuur leh oo ay aqoonsadaan meelaha banaan.
Markii ugu horreysay ee aan furay shirkaddayda, hoggaamiyeyaal badan oo ka tirsan warshadaha ayaa igula taliyay in aan ku takhasuso oo aan raadsado kaalin gaar ah; si kastaba ha noqotee, farqiga aan ku arkay shirkadaha badankood waxay ahayd inay aad u yar yihiin koox isku dheellitiran waxayna abuurtay nusqaanno istiraatiijiyadoodii oo aan la arkin. Taasi macnaheedu maahan inay ku fashilmeen si kasta oo ay ahayd, waxay kaliya ka dhigan tahay inaysan ku gaarin kartidooda buuxda hantida ay lahaayeen.
Ma tahay inaad shaqaaleysiiso ama la wadaagto?
Urur kastaa ma haysto agab uu ku shaqaaleysiiyo shaqaale waqti buuxa ah. Maalmahan, maaha wax aan caadi ahayn in la yeesho lammaane dibadda ah dadaalka suuq-geynta dhijitaalka ah.
Ruqsad siinta Qalabka - Waxaan marin u heli karaa qalabka shirkadda ee aan kari karo qiimaha macaamiisha oo dhan. Tani dhab ahaantii waxay badbaadin kartaa shirkad xoogaa lacag ah.
Focus - Kheyraad dibadeed ahaan, waxaan ku leeyahay faa iidada qayaxan ee ah inaanan ka walwalin howlaha shirkada, shirarka, siyaasada, ama xitaa (inta badan) xadidaada miisaaniyada. Caadi ahaan waxaa la i kiraystay si aan u xaliyo dhibaatada ka dibna aan u raaco taas si hagar la'aan ah - iyadoo shirkad bixinaysa qiimaha aan bixiyo halkii aan ka ahaan lahaa mushahar laga yaabo ama aan wax soo saar lahayn.
Canshuurta - Xaqiiqdii shirkad kastaa waxay leedahay wareejin, sidaa darteed waxaan awoodaa inaan daboolo dulduleelada xirfadaha markay macaamiishaydu haystaan ​​shaqaale wareegaya. Dhab ahaantii urur kastaa wuxuu leeyahay wareejin!
Hirgelinta - Hirgelinta xalal cusub waxay ka qaadi kartaa koox xad dhaaf ah waxayna runtii niyad jabin kartaa shaqaalahaaga. Keenista lammaane korka si loo fuliyo waa hab fiican oo lagu helo khibradda ku meel gaadhka ah iyo agabka aad u baahan tahay si aad u hesho hirgelin guul leh.
Xilliga Xilliga - Shirkaduhu waxay inta badan leeyihiin baahiyo xilliyeed oo ka sarreeya agabkooda gudaha. Lahaanshaha lamaane weyn oo kordhin kara shaqaalahaaga ayaa ku anfacaya waqtiyada mashquulka badan.
Khabiirka Misbaax - Shirkadaha badankood ma kireysan karaan kheyraad door kasta oo lagama maarmaan ah, laakiin waxaan horumariyay shabakadda xirfadaha sannadihii la soo dhaafay iyada oo hoggaamiyeyaal la caddeeyay. Taasi waxay ka dhigan tahay inaan la imaan karo doorarka lagama maarmaanka ah markii loo baahdo, anigoo hagaajinaya miisaaniyadda iyo inaan keeno horyaallo run ah oo kordhin doona fursadaha guusha.
Khibrad ballaadhan - Ka shaqeynta dhammaan warshadaha oo aan ku sii sugnaado isbeddellada warshadaha, waxaan u keenayaa macaamiishayda xalal cusub. Haddii aan ku tijaabino istiraatiijiyad ama mashruuc hal shirkad ah oo ay si fiican u shaqeyso, waxaan u keenayaa dhammaan macaamiishayda oo waxaan ku hirgeliyaa dhibaatooyin aad u yar marka loo eego haddii macmiilku kaligiis sameeyo.
Sawir-gacmeedkan oo ka socda Spiralytics, Sida loo qaabeeyo Kooxdaada Suuqgeynta Dijital ah, wuxuu faahfaahinayaa 13ka door ee lagama maarmaanka u ah kooxda suuq geynta casriga ah si ay u guuleystaan.
Hababka Suuqgeynta Dijital ah
Waaxyaha suuqgeyntu maanta waxaa saaran cadaadis badan. Inta badan waxaa jira cadaadisyo lagu dhimayo shaqaalaha, u haajireen qalab cusub, iyo had iyo jeer si ay u koraan suuqgeyn iyada oo loo marayo dhexdhexaadin iyo kanaalo cusub. Way ku adag tahay kooxaha suuqgeyntu inay ku soo kordhiyaan agab xaddidan… ha ka welwelin inaad qabato hawl maalmeed. Markaan eegno inaan shaqaaleysiino agabka kooxaheena ama aan u soo jeedineyno macaamiisheena, waxaan inta badan sameynaa tijaabinta dabeecadda si aan u hubinno ku habboonaanta… ma ahan oo keliya xirfadaha saxda ah… waxaa lagu shaqaaleysiiyay:
Self-Motive - Waqti yar oo aad ku hagi karto oo aad ku caawin karto kooxda suuq-geynta dhexdeeda, waa inaad heshaa shaqaale ku qanacsan cilmi-baarista iyo helitaanka macluumaadka ay u baahan yihiin khadka. Sugitaanka tababarku maaha wax loo baahan yahay maalmahan marka la eego aqoonta adduunka ee farahayada.
Door-Dabcan - Inta badan waaxaha suuqgeyntu ma laha laba boos kasta, sidaa darteed tababar isdhaafsi iyo dabacsanaan door waa lama huraan. Naqshadeeye garaafeedka ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu ku boodo boosteejada iimaylka oo uu naqshadeeyo iimaylka. Khabiir ku takhasusay warbaahinta bulshada ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu nuqul u qoro goobta. Helitaanka dadka aan ku qanacsanayn oo keliya doorarka rogroga laakiin aad u rajaynaya waa cajiib.
Halista-dulqaadka – Suuqgeyntu waxay u baahan tahay tijaabo iyo guuldarro si loo ogaado fursadaha lagu guulaysan karo. Lahaanshaha koox si liidata u diida waa daw hubaal ah oo lagu dhimi karo horumarkaaga inta tartamayaashaadu ay hore u boodaan. Kooxdaadu waa inay fahmaan yoolalka oo ay hore u xaaqaan si ay wax u bartaan, ula qabsadaan, u horumariyaan, oo ay u dhaafaan waxa laga filayo.
Hal-abuurka macquulka ah - Fahamka xogta iyo hababka waa xirfad lagama maarmaan u ah xubin kasta oo suuqgeyneed. Xubnaha kooxda suuqgeyntu waa inay awoodaan inay falanqeeyaan hababka iyo natiijooyinka oo ay helaan xalal hal abuur leh si ay uga gudbaan caqabadaha.
Karti Farsamo – Waa duni dhijitaal ah waxaana lama huraan ah in aad leedahay koox suuq gayn leh oo aqoon u leh tignoolajiyada, baahi u qaba automation, oo raadinaya in ay ballaariyaan khibradaha suuqa aad beegsanayso ee astaantaada.
Fikradayda shakhsi ahaaneed, maalgashiga tijaabada habdhaqanka si loo hubiyo in xubin kooxeedku uu si madax-bannaan u guulaysan karo, oo ay weheliso kooxdaada, iyo gudaha dhaqanka ururkaagu wuxuu u qalmaa miisaankiisa dahabka ah. Haddii aad raadinayso lammaane, waan ka niyad jabi lahaa inaanan kooxdayada ku kordhin Highbridge.
Qeybaha Suuqgeynta Digital
Marketing Manager Digital, ololaha Manager, ama Maareeyaha Mashruuca - in la kormeero mashaariicda lana hubiyo in kooxda iyo ololayaashaadu ay si hufan u shaqeeyaan oo daboolayaan baahiyaha ururka.
Agaasimaha Creative or Designer graphic - si loo ilaaliyo joogteynta muuqaalka ah ee xiriirka astaanta iyadoo loo marayo wadiiqooyinka dhijitaalka ah.
Soosaarayaasha ama Xallinta naqshadeeyayaasha - isku-dhafka iyo walxaha is-dhexgalka ayaa shardi u ah urur kasta maalmahan, markaa in la haysto koox loo diyaariyey inay dhisto dhabarka adag oo leh khibrad adeegsi oo weyn oo dhinaca hore ah waa lagama maarmaan. Haddii ururkaagu uu leeyahay koox horumarineed oo IT ah, waa muhiim inay yihiin kheyraad la wadaago oo lagu abaalmariyo kartida ay u awoodaan kooxdaada.
Falanqeeye Suuq Digital - waa lagama maarmaan in koox kasta oo suuq-geyn suuq-geyn ahi ay leedahay qaab qorsheysan oo lagu cabbiro saameynteeda iyo sidoo kale warbixin wax ku ool ah oo ka caawin doonta hoggaaminta iyo kooxdu inay aqoonsadaan natiijooyinka.
Istaraatijiyad Suuq geyn Dijital ah - dadaal kasta waa inuu gacan ka geystaa sidii loo wadi lahaa tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah iyo yoolalka guud ee ururka. Istaraatiijiyad wuxuu isku dhejiyaa qaybahaan isla markaana wuxuu hubiyaa in dhammaan wadiiqooyinka, dhexdhexaadiyeyaasha, iyo warbaahinta ay si buuxda u siman yihiin.
Maamulaha SEO ama Khabiir - makiinadaha raadintu waxay sii wadaan inay ku hoggaamiyaan dhammaan kanaallada adeegsadaha ujeeddo si loo baaro go'aanka iibsiga. Nidaamyada raadinta dabiiciga ah waxay bixiyaan macluumaad badan oo kooxaha suuq-geynta dijitaalka ay isticmaali karaan iyo sidoo kale kanaal ku-habboon oo soo-gal ah oo loogu talagalay wadista wadista. Lahaanshaha qof wadista xeeladahan qiimaha-wax ku oolka ah ayaa lagama maarmaan u ah urur kasta.
Raadi Khabiirka Xayeysiinta - halka raadinta dabiicigu u baahan tahay dardar iyo awood ay ku hoggaamiso bogagga natiijada mashiinka raadinta, xayeysiintu waxay buuxin kartaa farqiga u horseedaya raadadka. Ma ahan kharash la'aan iyo khibrad, in kastoo. Iibsashada xayeysiintu waxay noqon kartaa qalad aad u xun oo qaali ah haddii aadan khibrad u lahayn.
Muuji Khabiirka Xayeysiinta - waxaa jira baraha kale ee leh dhagaystayaasha aad isku dayeyso inaad la xiriirto, marka xayeysiinta bogaggaas si loo wado wacyigelin, ka qaybqaadasho, iyo beddelaad waa istiraatiijiyad adag. Si kastaba ha noqotee, tirada meheradaha xayeysiiska ah, beegsashada awoodaha, noocyada xayeysiiska, iyo noocyada imtixaannada wax kama dhinna sayniska. Helitaanka qof inuu kobciyo saameynta xayeysiintaada bandhig waa waajib.
Maareeyaha Warbaahinta Bulshada ama Khabiir ku takhasusay - baraha bulshada ayaa sii wada inay noqdaan kheyraad lagula macaamilayo iibsadayaashaada mustaqbalka iyo sidoo kale marin aad u wanaagsan oo lagu hormariyo hey'addaada shaqsiyeed ama xirfadle. Inaad haysato qof baaraya, kormeeraya, kuna kobcinaya bulshadaada iyada oo loo marayo u doodid, taageero, iyo macluumaad waa istiraatiijiyad adag oo loogu talagalay nooc kasta oo casri ah.
Khibrada Isticmaalka or Designer Interface Designer - Kahor intaadan soo-saarahaaga dhammaadka hore codayn karin khibrad, waxay u baahan tahay in la horumariyo oo si buuxda loo tijaabiyo si loo yareeyo jahwareerka loona hagaajiyo qanacsanaanta macaamiisha. Haysashada qof fahmaya naqshadeynta kumbuyuutarka aadanaha waa maalgashi lama huraan ah marka la kobcinayo khibradahaas.
Qoraa - Wargeysyada cadcad, kiisaska isticmaalka, qoraalada, qoraalada boggaga, iyo xitaa cusbooneysiinta warbaahinta bulshada waxay u baahan yihiin qorayaal karti leh oo si buuxda uga tarjumi kara codka, shakhsiyadda, iyo macluumaadka aad isku dayeyso inaad faafiso. Haysashada qoraa shaqaalaha waxay u noqon kartaa raaxo dad badan… laakiin waa lama huraan haddii aad rabto maalgashiga ku jira mawduucaaga inuu si dhab ah saameyn ugu yeesho.
Suuq Email - Laga soo bilaabo samatabbixinta, illaa mawduuca, illaa naqshadeynta waxyaabaha… emaylka waa aalad isgaarsiineed oo gaar ah oo u baahan karti iyo khibrad si loo helo natiijooyin. Sanduuqayaga sanduuqyadu waa la buuxiyey maalmahan, markaa helitaanka macaamiisha inay furaan oo gujiyaan waa caqabad.
Khabiirka Suuqgeynta Mawduuca ama Istiraatiijiyad - Maxay yihiin mawduucyada ay rajadaadu iyo macaamiishaadu raadinayaan? Sidee maktabadda waxyaabaha aad soo saartaa u egtahay? Istaraatiijiyad suuq-geyn ah ayaa ka caawisa mudnaanta iyo aqoonsiga mowduucyada isweydaarsanaya… iyo sidoo kale hubinta inaad madax ka ahaato tartankaaga.
Waa tan faahfaahinta buuxda:
Tags: suuq-geynta dijitaalka ahmarketing digitaljagooyinka suuq-geynta dijitaalka ahdoorarka suuq-geynta dijitaalka ahkooxda suuq geynta dijitaalkacinwaanada suuq geynta dijitaalka ahnaqshadeeyaha garaafkamagacyo shaqo suuqgeyneedkooxda suuq geyntaRaadinta khabiirka suuqgeyntamaamulaha seokhabiirka warbaahinta bulshadanaqshadeeyaha xalalka
Sida Loo Sameeyo Xaqiijinta Iimaylka Microsoft Office (SPF, DKIM, DMRC)